Somaliland: Madaxweynaha Oo Laga Codsaday Inuu Qisaas Ku Fuliyo Maxaabiista Dil-sugeyaasha Ah Ee Xabsiyada Somaliland Buux-dhaafiyey & Sababta - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Madaxweynaha Oo Laga Codsaday Inuu Qisaas Ku Fuliyo Maxaabiista Dil-sugeyaasha Ah...
Baadi-goob Shan maalmood qaatay ayaa lagu guuleystey in gacanta lagu dhigo Laba Nin oo ku eedaysan Nin Jimcihii Toddobaadkan lagu dilay badhtamaha Magaalada Laascaanood, kaasi oo Alle ha u naxariistee Magaciisu ahaa Cabdinaasir Cumar Shaacuur.
Taliyaha Qaybta Booliska ee Gobolka Sool Cabdirisaaq Maxamed Faarax oo ka warbixiyey baadi-goobkii ugu ballaadhnaa ee ciidammadu sameeyaan ayaa sheegay in lagu guulaystey soo qabashada Raggaa ku eedaysan dilka Marxuumka Ganacsadaha ahaa.
“Shantii iyo Badhkii ayaanu ku guulaysaney in aan qabano Nimankan denbiilayaasha ah oo aanu shan maalmood Booliisku daba-taagnaa.” ayuu yidhi Taliyaha qaybta Booliiska ee Gobolka Sool, waxaanu intaa ku daray “Raggaasi markii Gacanta lagu soo dhigay waxa la geeyay Xabsiga dhexe ee Magaalada Laascaanood.”
Taliyaha Ciidammada Booliisku wuxuu farriin u diray Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland “Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, waxaanu ka codsanaynaa in Gacan ku dhiigleyaasha loola dhaqmo Waddo ka gedisan Waddadii hore, si loo helo Xal waara oo Nabad ah, waxaanu codsanaynaa in la mariyo (Xukunka) Shareecada Islaamka oo la laayo Ciddii disha Cid kale.”
Guddoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayre Dirrir oo isaguna saxaafadda la hadlay, ayaa u Mahad-naqay Ciidammada Booliiska iyo kuwa Milletariga ee Gobolka Sool oo iska kaashaday soo qabashada Raggaa ku eedaysan Dilka Ganacsade Shaacuur “Waxaan u Mahad celinayaa Ciidammada Booliiska iyo Milletariga iyo saraakiishooda fuliyey Hawl-galkaa ee suurto-geliyey qabashada Gacan ku-dhiigleyaashii 15-kii bishan sida Xaq-darrada Laascaanood ugu dilay Ganacsade Cabdinaasir Cumar Shaacuur. Waa ILAAHAY Mahaddii, laakiin Ciidammada hawl-galka ka qayb-qaatay, hadday yihiin Booliiska, Hadday yihiin Kuwa Qaranka (Milletariga) iyo hadday Asluubta yihiinba waxaan leeyahay waad Mahadsan tihiin waajibaadkii qaran baad gudateen.”
Badhasaabka Gobolka Sool, ayaa isaguna farriin la mid ah ta Taliyaha qaybta Booliiska gobolkaa u diray Madaxweynaha Somaliland “Madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa inaad waajibaadkaaga ka gudato Dadka Dil sugayaasha ah ee Xabsiyada ka buuxa, oo aad mariso Cid kasta oo Dil suge ah in laga jaro wixii uu u geystay Walaalkii.”ayuu yidhi.
Si kastaba ha ahaatee, tallaabadan lagu soo qabtay Ragga dilka geystey ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey Guud ahaan gobolka, waxaase la eegayaa in xukun dil ah lagu fuliyo denbiilayaashan.